अचम्मको कोरोना परीक्षण – आरडीटी पोजिटिभ, जनकपुरको पीसीआरमा नेगेटिभ, टेकुमा पोजिटिभ !
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको दाबी नै गलत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बिहीवार मिडिया ब्रिफिङमा जनकपुरका १ जना १४ वर्षीय किशोरमा समेत कोरोना पोजिटिभ पाइएको बताएका छन् । उक्त सूचना पाएलगत्तै जनकपुरमा भाय र त्रासको माहौल बनेको छ ।
तर देवकोटाले बताए जस्तो जनकपुरमा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी रामेश्वर कार्कीले बताएका छन् । ‘हाम्रो धनुषा जिल्लामा हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ आएको छैन,’ डीएसपी कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘अरु जिल्लामा पाइएको होला, त्यस बारे आफूलाई जानकारी छैन ।’
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका कोरोना फोकल पर्सन समेत रहेका डा. कुलदीप पण्डितका अनुसार सर्लाही जिल्लाका एक जना १४ वर्षीय युवकमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बताएको थियो ।
पोजिटीभ पाइएका व्यक्तिमा यस अघि र्‍यापीड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पाइएको थियो । त्यसपछि उनको थप परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आइसोलेसनमा समेत भर्ना गरिएको थियो ।
‘त्यहाँ उनको थ्रोट र नसल स्वाब संकलन गरिएको थियो,’ डा. पण्डितले लोकान्तरसँग भने, ‘तर प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनको रिजल्ट नेगेटिभ देखिएको थियो ।’ जनकपुरमा गरिएको प्रारम्भिक नतिजामा नेगेटिभ देखिए पनि थप परीक्षणका लागि उक्त स्वाब काठमाडौं टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । उता आइसोलेसनमा भर्ना भएका ती युवालाई डिस्चार्ज गरेर सर्लाहीको क्वारेन्टाइनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
जनकपुरमा रहेको प्रयोगशालामा पनि पीसीआर मेसीनबाट नै परीक्षण हुने गर्छ । तर उक्त मेसिनमा नेगेटिभ आएको स्वाबको परीक्षण काठमाडौंमा भने पोजिटिभ आएको छ । अचम्मको कुरा त के हो भने जनकपुरको मेसिनमा निगेटिभ आउने स्वाब थप परीक्षणको लागि काठमाडौं पठाउने नै गरिएको छैन ।
आज उनको कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उनलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराउने तयारी गरिएको उनले बताए । १४ दिनअघि उनी भारतको दिल्लीबाट आएका थिए । उनी अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा नै रहेको उनले बताए ।